ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေစေဖို့ မိန်းကလေးတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း (၁၈)မျိုး - For Her Myanmar
Copyright © 2017 For Her Myanmar, All rights Reserved. ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေစေဖို့ မိန်းကလေးတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း (၁၈)မျိုး	0
ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေစေဖို့ မိန်းကလေးတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း (၁၈)မျိုး	3 weeks ago by Nilar
၁၈ မျိုးဆိုလို့ များတယ်ထင်နေပါသလား..? အကုန်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ..
“သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ”တဲ့။ ဝမ်းဗိုက်ဟာ ဘယ်တော့မှ ပြည့်တယ်ရယ်လို့ မရှိသလို မိန်းကလေးတွေရဲ့ လှချင်ပချင်စိတ်ကလည်း ဘယ်တော့မှ မကုန်ပါဘူး။(အစားသမားမို့ အစားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောမိတာ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။😁) ခုခေတ်မှာ ပစ္စည်းတွေကလည်း အစုံပေါ်နေတော့ ဝယ်ချင်စရာတွေချည်းပါပဲ။ အကုန်ကောင်းလို့ အကုန်ဝယ်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်ရာကို ရွေးချယ်အသုံးပြုတတ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။ပျိုမေတို့ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်နဲလှနေစေဖို့အတွက်ကတော့ ဒီပစ္စည်း (၁၈)မျိုးက မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ဘာတွေလဲဆိုတော့……
ဒါက ကျွန်မပြောဖို့တောင် လိုမယ်မထင်ဘူး။ မိန်းကလေးတိုင်း အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်ပါ။ ကိုယ့်အသားအရေနဲ့သင့်တော်မယ့် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုရုံပါ။ အဆီပြန်တတ်တဲ့သူက တစ်နေ့ (၂)ခါကနေ(၃)ခါလိုအပ်သလို သုံးနိုင်ပြီး အသားခြောက်တဲ့သူတွေကတော့ (၁) ခါလောက်ပဲ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
မျက်နှာသစ်ပြီးရင် ကျိန်းသေပေါက် သုံးသင့်တဲ့အရာပါ။ မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေး အကြွင်းအကျန်တွေ ဖယ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးပါ။ မျက်နှာလေးကြည်လင်နေဖို့အတွက် ရှိသင့်ပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်သေတွေ ရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့ (၁) ပတ်မှာ (၁)ကြိမ် အလွန်ဆုံး (၂)ကြိမ်လောက်ပဲပဲ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
စီရမ်က မျက်နှာရဲ့အသားအရေ အတွင်းထဲထိ ဆဲလ်တွေကို အာဟာရဖြည့်ပေးပါတယ်။ အသက်(၂၀)ကျော် မိန်းကလေးတိုင်း နောင်တစ်ချိန် အရေပြားတွန့်တာကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာပါ။တစ်နေ့ကို မနက်နဲ့ည (၂)ကြိမ် တိုနာသုံးပြီးရင် လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။
စီရမ်ပြီးရင် ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ moisturizer လေးလိမ်းလိုက်ရင် အသားအရေလေးစိုပြည်နေဖို့ ပြီးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့။ ခုလိုဆောင်းတွင်းမျိုးဆို ပိုပြီးတော့တောင် လိုအပ်ပါသေးတယ်။
အသက်အရွယ်ကြီးလာရင် အိုမင်းနေပြီဆိုတာ ရှေ့ပြေးသက်သေပြတာ မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်က အရေးအကြောင်းတွေပါ။မနက်၊ည မလိမ်းရင်တောင် အနည်းဆုံး ညဘက်တော့ လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ကိုယ်တွေ မိန်းကလေးတွေက ထာဝစဉ်နုပျိုချင်တာလေ။ အဲ့တော့ eye cream ကလည်း မရှိမဖြစ် ဖြစ်ပြန်ရော။
မိတ်ကပ်လိမ်းရင် အခြေခံအကျဆုံးအရာ..လုံးဝ လုံးဝကို မရှိမဖြစ်ပါ။လိမ်းတဲ့အခါမှာတော့ လက်နဲ့ ပွတ်ဆွဲတာထက် နဖူး၊ပါး၊မေးစေ့ပေါ် မိတ်ကပ်တို့ပြီး စုပ်တံ ဒါမှမဟုတ် ရေမြုပ်လေးနဲ့လိမ်းတာက အသားအရေ တွန့်တာကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။SPF ပါတာမျိုးဆို ပိုကောင်းပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အသားအရေထိန်းသိမ်းနေတဲ့ကြားက အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သွေးသားပြောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝက်ခြံ၊အမည်းစက်နဲ့ တင်းတိပ် စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ မျက်နှာမှာ ဒါမျိုးတွေရှိနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုယုတ်လျော့စေပါတယ်။အဲ့အခါကျ အောက်ခံမ်ိတ်ကပ်လေးလိမ်းပြီး ကွန်စီလာလေးနဲ့ အုပ်လိုက်ရင် မသိသာတော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ ကွန်စီလာလည်း လိုတာပဲ။😁
အောက်ခံမိတ်ကပ်လိမ်းပြီးရင်တော့ မိတ်ကပ်ပေါင်ဒါ ပုတ်ရတာထုံးစံမို့ မိန်းကလေးတိုင်းရှိသင့်တာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် ခရင်မ်ပတ်ဖ်လေးလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
အရင့်အရင်ကတော့ ပါးနီက ပါးလေးနီရုံသက်သက် ခြယ်မှုန်းကြသည်ပေါ့ရှင်။ အခုတော့ မျက်နှာပုံစံဖော်ရာမှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။မျက်နှာသွယ်ချင်ရှည်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဝိုင်းချင်ရင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ပါးနီအကူအညီယူလို့ရတယ်နော်။ (အဲ့တော့ သိပ်လိုတာပေါ့။🤗)
ခုခေတ်မှာ အညိုချတာ အရမ်းကိုခေတ်စားပါတယ်။အစကတော့ နားမလည်ခဲ့ဘူး။မျက်နှာကြီးများ ညိုသွားမလားလို့…။😁လုံးဝ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ နဖူးစပ်၊ပါးရိုးနားရိုးနား၊မေးစေ့နားတစ်ဝိုက်ပါ့နော် အညိုချလိုက်ရင် မျက်နှာလေးပိုပြီး ထင်းသွားပါတယ်။ပိုပြီးလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။
မိတ်ကပ်အဖွေးသားနဲ့ မျက်လုံးကို ဘာမှမပြင်ဆင်ပဲ သွားရင် ဂွမ်းတာပေါ့ကွယ်။ သေချာတာက ဘယ်မိန်းကလေးမှလည်း အဲ့လို မလုပ်ပါဘူး။လိုင်နာလေးတော့ ဆိုးလိုက်ရမှ။တချို့ဆို မိတ်ကပ် သိပ်မလိမ်းဖြစ်ရင်တောင် ခပ်ပါးပါး လိုင်နာလေးတော့ ဆိုးတတ်ကြတယ်။
လိုင်နာလေးဆိုးပြီးရင် ကိုယ်လိမ်းခြယ်ထားတဲ့မ်ိတ်ကပ်အရောင်၊ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အင်္ကျီအရောင်နဲ့ ကိုက်ပြီး eyeshadow လေးခြယ်လိုက်ရင် ပိုပြီးပြည့်စုံသွားတာပေါ့။ အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တောင် အညိုပြေပြေလေး ခြယ်ထားရင် တစ်မျိုးလေးလှနေမှာပါ။
လိုင်နာနဲ့ eyeshadow ခြယ်ပြီးမှသာ မျက်တောင်ကော့ဆေးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ မျက်လုံးလေးဆွဲဆောင်မှုရှိနေဖို့အတွက် မျက်တောင်ကလည်း အပြည့်အဝ ကူညီပေးပါတယ်။ နဂိုမျက်တောင်ထူသည်ဖြစ်စေ၊ပါးသည်ဖြစ်စေ မျက်တောင်ကော့ဆေးကို သုံးပေးမှသာ ပိုပြီးထင်းစေပါတယ်။
မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် အလှအပအတွက် မျက်ခုံးမွှေးကလည်း မပါမဖြစ်ပါပဲ။ ဒါတင်မကပါဘူး..မျက်ခုံးမွှေးပေါ်မူတည်ပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာက အများကြီး ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာဆိုဘာမှ မလိမ်းထားရင်တောင် မျက်ခုံးမွှေးလေး သေသေသပ်သပ်ဆွဲထားတာက လူကိုကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။
မိန်းကလေး ၇၅%ဟာ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားရင် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိတ်ကပ်ပြင်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းနီမပါရင် လုံးဝမပြည့်စုံပါဘူး။မိန်းကလေးတိုင်း အနည်းဆုံး နှုတ်ခမ်းနီ (၂)ချောင်းလောက်တော့ရှိသင့်ပါတယ်။ ရိုးရိုးကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီရယ် အရောင်လေး ပိုရွှန်းစိုသွားအာင် အပေါ်ကထပ်အုပ်ဖို့ gloss လေးရယ်ပါ။
မျက်နှာအသားအရေပဲ အရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေပါတဲ့ နေရောင်ဒဏ်ဟာ အရေပြားကင်ဆာထိဖြစ်နိုင်လို့ တစ်ကိုယ်လုံးက အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမှာပါ။ ဒါကြောင့်လိုးရှင်းဟာလည်း မရှိမဖြစ်ပါ။
လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်ရနံ့လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်သင့်ပါတယ်။ ဈေးကြီးသည်မကြီးသည်ဖြစ်စေ ရနံ့မွှေးမွှေးလေးက လူတစ်ဖက်သားကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ရေမွှေးက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပိုလှသွားစေတာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိစေတာတော့ အမှန်ပါ။
တချို့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်အသားမှာ အရင်စမ်းသပ်ပြီးမှ ဝယ်သင့်ပါတယ်။ပစ္စည်း အရည်အသွေးကောင်းသော်ငြား တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်နဲ့မှ မတည့်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်နဲ့သင့်တော်မှ အသားအရေနဲ့တည့်မှပဲ ဝယ်ပါ။(*အလှကုန်ပစ္စည်းလေးပုံလေးတွေက သင့်တော်တဲ့ပုံထည့်ထားရုံ သက်သက်နော်။)
ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ပါ။ဒီ(၁၈)မျိုးကတော့ အခြေခံပါပဲ။ ကဲပျိုမေတို့ (၁၈)မျိုးလုံး ရှိနေပြီလား???😉မရှိသေးရင် အပြေးလေးဝယ်လိုက်ကြနော်။😉
Tags: attractive, Beauty, cosmetics, girls, skincare, things must have